लामाले आफ्नै नेताबारे लेखेका कुरा निकै गम्भीर : डा. भट्टराई – Gandaki Voice
Home/राजनीति/लामाले आफ्नै नेताबारे लेखेका कुरा निकै गम्भीर : डा. भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य, पूर्वसांसद एवं राजदूत कमानसिं लामाले आफ्नै नेताबारे लेखेका कुरा निकै गम्भीर भएको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले मृत्युशैय्यामा रहेको मान्छेले झुटो नबोल्ने बताउँदै तसर्थ मृत्युअघि लामाले लेखेका कुरा निकै मार्मिक रहेको बताए । भट्टराइले जतिसुकै तर्क/कुतर्क गरे पनि नैतिक पतनको प्रश्न देशको शीर्ष नेतृत्वमा रहने जुनसुकै व्यक्तिका निम्ति क्षम्य हुनै नसक्ने बताए ।
‘भनिन्छ, मृत्युशैय्यामा रहेको मान्छेले झुटो बोल्दैन । मृत्युशैय्याबाट कमानसिं लामाले आफ्नै नेताबारे लेखेका कुरा निकै गम्भीर र मार्मिक छन्,’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘जतिसुकै तर्क/कुतर्क गरे पनि नैतिक पतनको प्रश्न देशको शीर्ष नेतृत्वमा रहने जुनसुकै व्यक्तिका निम्ति क्षम्य हुनसक्दैन । चेतना भया !’
पूर्वसांसद लामाले निधन हुनुभन्दा केही दिनअघि फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेका थिए । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई बर्बाद बनाएको र आफ्नै कान्छी श्रीमतीले समेत जीवनको अन्तिम अवस्थामा आएर धोका दिएको स्ट्याटसमा प्रष्ट लेखिएको थियो ।